Huwandu hweMapurisa Achavhota Hovhundutsa Vakawanda
HARARE — Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anoti haazi kufara nehuwandu hwemapurisa akanyoresa kuti avhote sarudzo dzisati dzasvika kana kuti special vote.
Mapato aya nanoti mapurisa aya akawandisa kudarika huwandu hwemapurisa ese ari munyika.
Izvi zvabuda mumusangano waitwa neveZimbabwe Electoral Commission, ZEC, nemapato ezvematongerwo enyika apo ZEC yange ichitsanangurira vemapato aya kuti special vote ichafamba sei.
Special vote inoitirwa vanenge vachitvhotesa, mapurisa, masoja pamwe magadhijeri anenge ari pabasa musi wesarudzo idzi dzichaitwa nemusi wa31 Chikukunguru.
Sachigaro weZEC, Justice Rita Makarau, vanoti pavanhu zviuru makumi manomwe nemazana matatu zvevanhu vari kuda mvumo yekuvhota sarudzo dzisati dzasvika, zviuru makumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana maviri mapurisa.
Mutauriri weZapu, VaMjobisa Noko vanoti kunyange hazvo ZEC iri kuedza napose painogona napo kuti sarudzo idzi dzifambe zvakanaka, havawirirani nehuwandu hwevanhu vari kuda mvumo yekuvhota semapurisa.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaMorgan Komichi, vatsinhira mashoko aVaNoko vachiti special vote ndeimwe nzira iri kuda kushandiswa mukubira sarudzo nekushandisa vanhu vasingakodzeri kuvhota pasi pechirongwa ichi.
Asi vachipundura mibvunzo pamusoro penyaya iyi, Amai Makarau vati ZEC inoshanda nezvainenge yapihwa neZimbabwe Republic Police uye munhu akabatwa kuti anenge asiri mupurisa haakwanisi kuvhota.
Vachitaura kudare reparamende nguva pfupi yapfuura pamusoro pegadziriro dzesarudzo, mutevedzeri wemukuru wemapurisa anoona nezvekufambiswa kwebasa, VaInnocent Matibiri, vakaudza komiti yeparamende inoona nezvemukati menyika kutiZRP ine mapurisa anodarika zviuru makumi mana nechidimbu. VaMatibiri vakati panguva yesarudzo vachashanda nema special constabulalry zviuru gumi.
Izvi zvinoreva kuti huwandu hwemapurisa nemaspecial constabulalry achashanda pasarudzo hushoma pane vanhu vari kuda mvumo yekuvhota semapurisa pa special vote.
Hatina kukwanisa kutaura nemapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Mune imwewo nyaya, mutauriri weMDC-T, VaDouglas Mwonzora, varamba mashoko ekuti mukuru wevechidiki mubato ravo, VaSolomon Madzore, vakataura mashoko anokonzera nyonga nyonga munyika nemusi weSvondo kuMarondera.
Izvi zvinotevera nyaya yabuda mubepanhau reHerald nenhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation yekuti VaMadzore vakakurudzira mhirizhonga munyika kuMarondera.
VaMwonzora vaudza vatori venhau kuti VaMadzore vakataura kuti bato ravo richaita zvese zvarinogona kuti sarudzo hadzibirwe uye kuti vanenge varuza sarudzo vachatambira zvido zveveruzhinji.